गगनलाई धन्यवाद दिँदै डा. केसीले ओली, प्रचण्ड र नारायणकाजीलाई दिए यस्तो चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लड्दै आएका डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा आफूसँग भएको सम्झौता अक्षरशः जे लेखेको छ, त्यो उल्लेख नभए सरकारसँग लड्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले कम्युनिस्ट र कांग्रेस सांसदहरु (जनप्रतिनिधि) माफिया र दलालको पक्षमा लागेर जनतालाई धोका दिइरहेको आरोप लगाए। सरकारी मेडिकल कलेज खोलेर जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्नेमा माफियाको पक्षमा लागेर निजीकरण गर्न खोजेको उनको आरोप छ। साम्यवादी र समाजवादीले जनताको पक्षमा लड्नुपर्नेमा आफूहरुले लड्नुपरेको भन्दै जनप्रतिनिधि नै जनतामारा भएको उल्लेख गरे।
‘ओलीजीकै सरकारसँग सम्झौता गरेको हो हामीले। फेरि त्यसलाई तोडमोड गर्ने र फेरि समितिमा पठाउने रु त्यसकारण बहुमतको आँडमा जनता मार्ने निर्णय गरे। बहुमतले विद्यार्थी मार्ने निर्णय गरे’, उनले भने, ‘म के भन्छु भने सम्झौतामा अक्षरशः जे लेखेको छ, त्यो हुँदैन भने म बस्छु। त्यसपछि हेरौं। ओलीजी, प्रचण्डजी र अर्को नारायणकाजीजी हेर्नुहोस्, म चेतावनी दिन्छु। तपाईका कार्यकर्ताहरुलाई ठीक गर्नोस्। र, हामीसँग सम्झौता गरेको एक शब्द पनि चेञ्ज नगरिकन ऐन आउनुपर्छ।’
डा. केसीले कांग्रेस नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई भने धन्यवाद दिए। गगनले मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य सेवामा सुधारका कामहरु गरेको, ग्रामीण भेगमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेको र अहिले आएर पनि उनले एक्लै भए पनि लडिराखेको प्रशंसा गरे।
‘म गगन थापालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यस्तो नेता चाहिन्छ । गगन थापालाई प्रशंसा ग¥यो भनेर माओवादी एमालेका नेताहरुले मलाई गाली गर्थे रे । देखिहाल्नुभो नि के गरे यिनीहरुले रु माफिया पोस्ने काम गरे । जनतालाई लात मारे’, उनले भने, ‘उनले मन्त्री हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवामा सुधारका कामहरु गरे । ग्रामीण भेगमा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेका थिए, अहिले आएर पनि उनले लडिराखेका छन् । एक्लै भए पनि लडे । तपाईहरुले बुझ्नुहोस, संसदमा कतिजना सांसद छन् रु त्यसमा कतिजनाचाहिँ लड्नेखालका रहेछन् त ? लु भन्नुहोस् त तपाईहरुले।’